‘मट्टी माला’का एक्सन हिरो ‘नेपाली टोनी जा’ भन्छन् – १२ वर्षदेखि जिम्न्यास्टिक हान्दै हिँड्थे – Everest Times News
‘मट्टी माला’का एक्सन हिरो ‘नेपाली टोनी जा’ भन्छन् – १२ वर्षदेखि जिम्न्यास्टिक हान्दै हिँड्थे
फिल्म ‘मट्टी माला’ मा डेब्यु गरेका चिरन राईले फिल्मी क्षेत्रमा चर्चा पाउन थालेको छ । २१ वर्षे यी चकलेटी नायकको एक्सनकै कारण मट्टीमालाले चर्चा बटुलेको थियो । टेके पौरखी राईको निर्देशनमा बनेको फिल्मको मुख्य भूमिकामा बुद्धि तामाङलाई देखाइए पनि फिल्मका आकर्षण भने चिरन नै बनेका छन् । मट्टीमालामा उनको नाम हो ‘चुप्पे’ ।
फिल्ममा सङ्ग्या श्रेष्ठ उनको अपोजिट छन् ।नेपाली ‘टोनीजा’ का रुपमा चिनिएका उनको अभिनय धेरैले मनपराएका छन् । खोटाङ हलेसीका उनी अहिले प्लस टु मा पढिरहेका छन् । सानैदेखि पढाईमा भन्दा जिम्न्यास्टिकमा रुचि राखेको बताउने उनले खोटाङमै रहदाँ निखिल उप्रेतीलगायतको फिल्म हेरेको बताए । गाउँको टिभिलाई नै फिल्म हल बनाएर फिल्मी यात्राबारे सपना देखेका चिरन यतिबेला सोचेभन्दा बढी माया दर्शकबाट पाएको भन्दै दंग छन् । उनै नवनायक चिरण राईसँग एभरेस्ट टाइम्सका लागि नेत्र तामाङले गरेको कुराकानी:
एक्सन विधाबाट फिल्म यात्रा शुरु गर्नुभएको छ, दर्शक र फिल्म टिमको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको छ ?
यो मेरो पहिलो प्रजेक्ट हो । यसमा मैले सोचेभन्दा धरै राम्रो भएजस्तो लाग्छ । निर्देशक पनि नयाँ नै हुनुहुन्छ । फिल्मबारे दर्शकबाट प्रशंसा पाइरहेको छु । मेरो एक्सन र फाइटलाई दर्शकले मनपराई दिनुभएको छ । मेरो लागि त पहिलो प्रजेक्ट पाउनु नै ठुलो कुरा थियो । तर, यतिको प्रशंसा पाउँछु जस्तो लागेकै थिएन । फिल्म टिमले पनि मलाई मन पराएरै टिममा राख्यो । यसै कारणले होला, सिक्वेल बनाउने कुरा पनि भएको छ ।
पछिल्लो समय नेपाली फिल्ममा एक्सन स्टन्टको अभाव देखिएको छ, यो जोखिमयुक्त अभिनय पनि भनिन्छ, सुटिङका दौरानमा कतिको गाह्रो भयो ?
फिल्ममा कतिपय दृश्यहरु धेरै टेक लिनुपर्ने रहेछ । त्यस्तो बेलामा भने निकै गाह्रो भयो । एउटा सिन दिने क्रममा बालबाल जोगिए । नत्र घाँटी भाँचिने थियो । पहिले पहिले डोरीले बाँधेर स्टन्ट दिने भन्ने कुराहरु सुनेका थिए । तर, म वास्तविक रुपमा स्टन्टहरु गर्न रुचाउँछु । यसले गर्दा पनि केही जोखिम हुने रहेछ । तर, काम गर्दै जाँदा विस्तारै यस्तो बाधाहरु हट्ला नि ।
तपाईंलाई नेपाली टोनीजा पनि भनिनेरहेछ, यस्ता जोखिमपूर्ण खेलहरु कसरी सिक्नुभयो ?
म खोटाङको गाउँमा जन्मेको । १२ वर्षदेखिनै स्कुलमा जाँदा होस या खेतबारी–जिम्न्यास्टिक गर्थे ।
साथीहरुले मनपराउँदैनथे । सायद स्कुलमा शिक्षकहरुले पनि मन पराउनुभएन होला । तैपनि यो अभ्यासलाई छाडिनँ । पछि निखिल उप्रेतीका फिल्महरु हेर्न थाले गाउँकै घरको टिभीमा । त्यतिबेलाको लागि हाम्रो फिल्म हल भनेकै टिभी थियो । फिल्म हेर्दै फिल्ममा जस्तै एक्सन गर्दागर्दा अभिनय क्षेत्रमै लाग्ने मन भयो ।
मेरो यस्तो बानी बाआमालाई भने मन पर्दैनथ्यो । मलाई उहाँहरुले सरकारी जागिरे होस भन्ने चाहनुहुन्थ्यो । पछि मेरो जिद्दीको अगाडि उहाँहरुको के लाग्थ्यो र । मैले राम्रो गर्दै गएपछि खुसी नै हुनुहुन्छ । एसएलसी सकाएपछि गाउँबाट काठमाडौं आएँ । अभिनयका लागि जिम्न्यास्टिकले मात्र त पुग्दैन होला भन्ने सोचे । केही समय तेक्वान्दो सिकें । केही समय मुई थाई पनि सिकें । त्यसैगरी अभिनय पनि । त्यसपछि भने फिल्म क्षेत्रमा केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा जाग्यो ।
अबको योजना अभिनयमै निरन्तरता दिनुहुन्छ होला, एक्सन अभिनयमै देखिनुहुन्छ ?
म साधारण कलाकार हुँ । म अहिले एक्सनमा देखिएको छु । भोलि अर्को रोलमा देखिन पनि तयारीमै छु । यसमै निरन्तरता दिने सोच बनाएको छु । केही प्रजेक्टमा अफर पनि आएको छ । दर्शकको साथ पाए भने पक्कै पनि राम्रो हुन्छ भन्ने सोचेको छु ।